The Ab Presents Nepal » रात परेपछि रक्सीमा डुब्‍ने र अनैतिक काम गर्नेलाई पार्टीले चिन्‍नुपर्‍यो’ – नेता नेपाल !
रात परेपछि रक्सीमा डुब्‍ने र अनैतिक काम गर्नेलाई पार्टीले चिन्‍नुपर्‍यो’ – नेता नेपाल !
काठमाडौं –: सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता माधवकुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पसेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई नै समाप्त पार्ने ‘धमिरो प्रवृत्ति’ बढेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।पार्टी कामको सिलसिलामा वीरगञ्ज पुगेका नेता नेपालले त्यहाँको स्थानीय आवाज एफएमसँग आइतबार कुराकानी गर्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गरे,रात परेपछि रक्सीमा चुर्लुम्म डुब्ने र अनैतिक काम गर्ने को–को हुन् ? पार्टीले चिन्नुपर्यो ! कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पसेर भित्रभित्रै छुरा रोप्ने, कम्युनिस्ट आचरणमा नरहने, बिनापैसा काम नगर्ने, पैसाको वरिपरि घुम्ने को–को हुन् ? पार्टीले चिन्नुपर्यो !
उनले कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै सङ्गठित भएकाले पार्टीलाई सिध्याउन लागिपरेको बताउँदै नेतृत्वले आँखा र कान खोल्नुपर्ने र तलका नेता कार्यकर्ताले भनेका कुरा सुन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने को–को हुन् ? पार्टीका इमान्दार नेता पन्छाएर सानो कोटरीका लागि काम गर्ने को–को हुन् ? क्रान्तिकारी, कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, कार्यकर्तामा हुनुपर्ने गुण के–के हुन् ? कोसँग छ, कोसँग छैन ? कसले वर्गीय दृष्टिकोणमा आधारित भएर काम गर्छ, कसले गर्दैन, सबैको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । राम्रो कुरालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नराम्रो कुरालाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ, नराम्रो काम गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ, तबमात्र फोहोर फालिन्छ । पार्टी सफा भएर बग्छ उनले विचार राखेका छन् ।कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा कलङ्क त छैनन् ? भन्दै नेता नेपालले प्रश्न पनि गरे ।
“समाजमा होस् या पार्टीमा सबैखालका विकृति विसङ्गति आचरणसँग जोडिएका हुन्छन् । पैसासँग जोडिएका हुन्छन् । यी सबै अनुचित कुराहरूलाई हामीले त्याग्नुपर्छ । हामीले मान्छेलाई सत्चरित्रताको दिशामा अघि बढ्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । यो त्यतिबेला सम्भव छ, हामी आफैँ सत्चरित्रवान् हुन्छौं । इमान्दार हुन्छौं । मिहिनेती, कर्तव्यपरायण हुन्छौं । हामीले व्यवहारबाट राम्रो आचरण देखाउन सकेनौं भने अरूलाई भन्ने कुराको अर्थ रहँदैन, उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
नेता नेपालले पार्टी एकता पूरा नभएकाप्रति पनि गुनासो गरे । उनले पार्टी एकीकरण भएको १६ महिनासम्म पोलिटब्युरो गठन हुन नसकेको, केन्द्रीय आयोग (अनुशासन, लेखा, निर्वाचन), केन्द्रीय निकाय (ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्) गठन हुन नसकेको, विभाग र प्रदेश कमिटीले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।यी सबै कमिटी केन्द्रीय कमिटीको मोडालिटीमा एउटै बैठकले, एउटै निर्णय र सर्कुलरले गर्न सकिने बताउँदै नेतृत्वले तदारूकता देखाउनुपर्ने बताए ।
यी सबै काम सक्न गाह्रो छैन । एउटै बैठक, एउटै निर्णयबाट, एउटै सर्कुलरबाट गर्न सकिन्छ । जसरी केन्द्रीय कमिटी एकीकरण गरियो, त्यही मोडलबाट गर्न सकिन्छ । तलसम्म हिजो भएका साविक कमिटीका सदस्यलाई समावेश गरेर गर्न सकिन्छ । कम छ भने सिनियरलाई थपेर, ठूलो छ भने जुनियरलाई हटाएर, सम्भव भए सबैलाई अटाएर एकताको कामलाई पूर्णता दिन सकिन्छ । कसैलाई पनि मेरो त तेरो, नजिक र टाढा ठानेर होइन, हजिो भर्खर आएका र पैसा भएकालाई बोकेर होइन, मन नपरेकालाई पन्छाएर, विधिमा टेकेर एकता गर्नुपर्छ,उनले भने ।
कुनै कार्यकर्ताविरुद्ध उजुरी प¥यो भने छानबिन गर्नुपर्ने, कार्यकर्ताको भावनाको सुनुवाइ हुनुपर्ने उनको दृष्टिकोण थियो ।हामीले कान खोल्नु्पर्यो, आँखा खोल्नुपर्यो । गलत गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्यो । तलका गुनासा सुन्नुपर्यो । बदमासी गर्नेलाई छाड्नुभएन । हामी त्यो गर्छौं, नगरी उपाय छैन,उनले भने ।